Shiinaha Lotus bamboo nasiib leh warshad bamboo warshad samameeye iyo soosaarayaal | Ubaxa Qoraxdu
Lotus bamboo nasiib leh Bamboo dhirta dracaena sanderiana
"Lotus Bamboo" waa mid ka mid ah noocyada baasaboorka nasiibka u leh, waxay ku habboon tahay dhaqashada dhirta, dhirta dheriga ah, iyo hydroponics. Qiimaha qurxinta ayaa ah mid aad u sareeya, waana mid ka mid ah cagaarka iyo qurxinta yar ee guryaha la dhigi karo muddo dheer.
Bamboo lotus wuxuu leeyahay luqadda ubaxa ee dhallinyaranimada, tartiib tartiib u kacaya, iyo taajirnimada iyo rajada.
Warshad Evergreen, koritaan deg deg ah, fududahay in lagu beero, dulqaad heerarka iftiinka hooseeya iyo waraabinta aan caadiga ahayn.
Sanadka oo dhan
Hawo cusub; Qurxinta gudaha
Doorbida cimilo diiran oo qoyan
23–28 ° C wuxuu ku fiican yahay koritaankeeda
Xirxirida gudaha: xidid lagu dhex buuxiyey biyo jellay bac balaastig ah, xirxirida banaanka: kartoonada waraaqaha / sanduuqyada xumbo ee hawada, sanaadiiqda alwaax / Sanduuqa birta ee bada.
Qiimaha ugu weyn:
Qurxinta guriga: Geedka yar ee bamboo-gacmeedka ayaa ku habboon qurxinta dhirta cagaaran. Waxaa lagu diyaarin karaa daaqadaha, balakoonnada iyo miisaska. Waxaa sidoo kale lagu qurxin karaa safafka hoolalka waxaana loo isticmaali karaa waxyaabo loogu talagalay ubaxyada la gooyey.
Nadiifi hawada: Bamboo Lotus wuxuu nuugi karaa gaasaska waxyeellada leh sida ammonia, acetone, benzene, trichlorethylene, formaldehyde, iyo nooca dhirta u gaarka ah ayaa yareyn kara daalka indhaha marka miiska la saaro.
Hore: Dhirta Gudaha ee Dracaena Sanderiana Spiral Lucky Bamboo
Xiga: Sansevieria Superba
Bamboo nasiib leh
Geedka Bamboo Nasiib Leh
Dhirta Nasiibka Leh
Dhirta Gudaha Dracaena Sanderiana Wareeg Nasiib B ...
Nasiib darro Bamboo Dracaena Tower Bamboo Lakabka Bamboo ...
Toosan Nasiib Bamboo Dracaena Sanderiana Toosan